၂၀၁၈ ခုနှစ်(ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ) - The Fifth Pillar
▪️ (၃.၁၁.၂၀၁၈) ခုနှစ်တွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
▪️ယခုကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသည် တတိယအကြိမ်မြောက် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး (၁.၄.၂၀၁၂) နှင့် (၁.၄.၂၀၁၇) ခုနှစ်များတွင်လည်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ ပေါ်ပေါက် ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
▪️ယခုကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များကို ပုံ (၂) တွင် ဖတ်ရှု့ရန်ဖြစ်ပါသည်။
? အဘယ်ကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပေါ်ပေါက်လာရသနည်း?
? ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း – ၁
▪️ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် အချုပ်အခြာအာဏာ (၃) ရပ်ဖြစ်သည့် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်များကို တတ်နိုင်သမျှ ပိုင်းခြားသုံးစွဲပြီး အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းခြင်း (Reciprocal Check and Balance) ပြုရမည်ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။
▪️ ထိုပြဌာန်းချက်အရ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်အတွက် ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်းစာလှယ်များထဲမှ အချို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် (ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့) နှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် များသို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရွေးချယ်၊ ခန့်အပ်ခံရသည့်အခါ ဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်ပေါ်ပေါက်လာပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။
▪️ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တာမွေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံခဲ့ရသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် “ဦးဝင်းမြင့်” သည် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အကြီးအကဲဖြစ်သည့် “သမ္မတရာထူး” တွင် (၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်) ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရသည့်အခါ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်သွားရသဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ တာမွေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်တွင် လစ်လပ်နေရာပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း -၂
▪️ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံခဲ့ရသည့် အချို့သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကွယ်လွန်သွားခြင်းကြောင့် လစ်လပ်နေရာပေါ်ပေါက်လာပြီး ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။
▪️ ယခုကျင်းပမည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ လစ်လပ်နေရာ(၁၃) နေရာတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် လစ်လပ်သွားသည့် မဲဆန္ဒနယ် (၁၁) နေရာထိ ရှိပါသည်။
▪️အသေးစိပ်ကို ပုံ (၁) တွင် ကြည့်ရှု့ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း – ၃
▪️ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မိမိ၏ သဘောဆန္ဒအလျှောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိကြောင်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားပါသည်။
▪️ ထိုပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ မင်းဘူးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံခဲ့ရသည့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် “ဦးနေမျိုးကျော်” သည် ၎င်း၏ သဘောဆန္ဒအလျှောက်နုတ်ထွက်သွားသဖြင့် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Data Collecting and Updated by – Saya Su Pone
← ၂၀၁၈ ခုနှစ် (ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ)
၂၀၁၇ ခုနှစ် (ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ) →
၂၀၁၈ ခုနှစ် (ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ)